China 169cm saribakoly silikôla artifisialy artifisialy mora vidy miaraka amina bokotra tanora lolo kilalao TPE silika firaisana saribakoly ho an'ny lehilahy mpanamboatra sy mpamatsy | Shaoman
169cm saribakoly silikôla artifisialy artifisialy mora vidy miaraka amina bokotra tanora lolo kilalao TPE silika firaisana ara-nofo ho an'ny lehilahy
Haben'ny fonosana: 158 * 40 * 30cm
Lanjan'ny fonosana: 45.5kgs
Vidiny: $ 600 / pc amin'ny akanjo mahazatra
Vidin'ny fandefasana: alefaso azafady ny adiresy marina, kaody zip ary ny habetsanao
hahavony 169cm valahana 93cm Lalina amin'ny fivaviana 17cm
Lalina am-bava 12cm hiomana 67cm Anus lalina 14cm
-tsorony 31cm Rofia 16cm Lanja afa-karatsaka 39.5kg
Tratra ambony 84cm Tongotra 96cm Halavan'ny tanana 16cm
Tratra ambany 86cm Tongotra 22cm andilany 51cm
Tombony amin'ny silika amin'ny firaisana ara-nofo:
Maharitra : Ampiasaina lava, tsy mora simba.
Olona velona: Fihetseham-po mikasika ny tena izy, tahan'ny mitovy habe amin'ny olombelona
malefaka: Taolam-by ao anatiny, azonao atao ny mametraka ny sarin'ny saribakoly tsy misy ahiahy.
ARO: Ny MSDS, CE, ROHS ary ny mari-pahaizana 16P dia nandalo avokoa
Fanehoana tarehy bebe kokoa: Ny endrika endrika misimisy kokoa toy ny tsiky, ny fanaovana tarehy ary ny fanorohana dia mahatonga ny saribakoly ho toy ny olombelona.
Japoney ny zava-bita farany tamin'ny maodely fanahafana mifanaraka amin'ny olombelona
hoditra, manaova, vokatra tena izy, mahatsapa tsara, marina amin'ny hodiny, afaka mitafy hafa ianao
akanjo, izy no mpitia manokana momba ny fiainana manokana anao.
Main dia mampiavaka ny robot manao firaisana ara-nofo:
1), Fomba firesahana: afaka miresaka sy mifandray amin'ny olona amin'ny teny anglisy sy sinoa izy. Afaka mandika ihany koa izy. Afaka mandika anglisy amin'ny teny sinoa izy na mandika sinoa amin'ny teny anglisy.
Azonao atao ny mangataka ilay robot manao firaisana ara-nofo mba hilaza tantara na vazivazy, na avelany hanao ny matematika, ary koa ny toetr'andro. Antony mifandray amin'ny Internet izy. Ka fantany daholo ny zavatra rehetra.
2), fanahafana ny simulateur: Mety hipoaka ny hodi-maso ny saribakoly robot, afaka mihetsika ny volomaso, afaka mihetsika ny lohany ary mihetsika koa ny vavany rehefa miresaka izy.
3), Vatana marefo avo lenta: miaraka amn'ny senseur touch-in maromaro ao amin'ny vatany, rehefa mikasika ny faritra mora tohiny, ohatra: ny tanany, ny feny, ny tratrany ary ny fivaviany, mamaly amin'ny feo mimenomenona mahafinaritra izy.
Ny rafitry ny fanafanana dia mahatonga azy hanana mari-pana ara-dalàna an'ny vatan'olombelona.
4), ny rafitra fanavaozana mandeha ho azy dia ahafahany manana ny rafitra miorina indrindra sy ny fiasa farany
Teo aloha: 167cm saribakoly silikôla artifisialy artifisialy mora vidy amin'ny kilalao firaisana amin'ny tratra lehibe TPE silika firaisana ara-nofo ho an'ny lehilahy
Manaraka: Silipo malefaka malefaka fitiavana firaisana amin'ny lahy sy ny vavy ho an'ny olon-dehibe kilalao saribakoly firaisana ara-nofo ho an'ny vehivavy